Raali ahaada Katrina iyo Shraddha: Shahid filimkiisa xiga Ileana D’Cruz ayaa la sameyn doonto – Filimside.net
Raali ahaada Katrina iyo Shraddha: Shahid filimkiisa xiga Ileana D’Cruz ayaa la sameyn doonto
Shahid Kapoor filimkiisa xiga Batti Gul Meter Chalus waxaa si rasmi ah duubis loogu bilaabi doonaa 19 Janaayo 2018 sidoo kalena waxaa la daawan doonaa 31 August 2018 waxaana Director ka ah Shree Narayan Singh oo horey u sameeyay filimka Super Hit-ka noqday Toilet Ek Prem Katha.
Waxaa siweyn la isla dhex maraayay Shahid Kapor filimkiisa xiga Batti Gul Meter Chalus inay la sameyn doonaan Katrina Kaif ama Shraddha Kapoor balse hada atirisho kale ayaa mashruucaan si lama filaan ah ku hantisay.
Ileana D’Cruz ayaa la xaqiijiyay inay atirisho kowaad filimkaan ka noqon doonto waxaana warbixintaan xaqiijisay Mumbai Mumbia Mirror ayadoo ku matali doonto qareen ama abuukaate Shahid jaceyl u qaadeyso sidoo kalena caawineyso madaama uu isagana qareen ku jilaayo.
Filimka Batti Gul Meter Chalus aya ka hadlaayo sida shacabka Hindiya shirkadaha gaarka loo leeyahay ugu dhig miirtaan adeega korontada loogana qaado lacago aysan awoodin waana dood ka jirto gobolada Hindiya ugu waa weyn.
Prerna Arora oo ka mid ah soo saarayaasha filimakan ayaa xaqiijisay in Ileana ay heshiis la gaareen sidoo kalena duubista filimkaan bilaaban doonto 19-ka Janaayo 2018.
Waxaa Aqrisay 221